Nei Tisarudze Us - Jiangyin Unite Wepamusoro Heavy Viwanda Co, Ltd.
7 ZVikonzero zvekusarudza isu
Tine mhando yepamusoro, kugona kukuru, kugona kweR & D kwechikwata chehunyanzvi. Iyo kambani ine ace technical technical musana, iyo hydraulic mashini inoita ruzivo kupfuura makore makumi maviri neshanu, inopa vatengi nemutengo-unoshanda wakazara wekushandura michina uye mhinduro.
8 inoisa mitsara yekugadzira yekudzoreredza vatengi vekunze uye vekunze kuti vape hunyanzvi simbi uye isiri-simbi matambudziko. ayo akakodzera makuru makuru esimbi zvigayo uye marara maindasitiri. Ferrous simbi yekuyera indasitiri.
Hwendefa dzese dzesimbi dzinoshandiswa mumidziyo dzakagadzirwa neQ235, 45 #, 16Mn, 65Mn uye zvimwe zvakasiyana kubva kune akakurumbira epamba simbi inogadzira. Kudya kwemukati kupfeka mahwendefa akagadzirwa neNM500 uye inovimbisa yemhando yepamusoro uye hupenyu hwakareba hwebasa.
Isu tichagadzira mamwe anopisa mamodheru emuchina pamberi penguva, izvo zvichapfupisa zvakanyanya nguva yekuendesa.
Tine gumi yekugadzira mitsara mufekitori. Mutungamiriri wechikwata cheye yega yekugadzira tambo inoitisa basa rese rekugadzira michina. iyo muridzi zvachose inopfuura 150 seti yemahara CNC epasi mhando inofinha uye yekugaya muchina, NC lathe, NC yekucheka muchina, CNC yekumisikidza nzvimbo uye yakadzika gomba kuchera uye inofinha muchina, mhando yega yega yekubatanidza inodzorwa.
Mushini usati wabva mufekitori, munhu akasarudzika anozove nebasa rekumisikidza muchina uye nekupa vhidhiyo yekuongorora sevhisi. Ipa maawa makumi maviri nemaviri epamhepo zvehunyanzvi kubvunza masevhisi, yekuisa pasuwo-ku - suo kuisirwa uye mushure-kutengesa mabasa ekuchengetedza pasirese.
Iko kushambadzira kwemusika weUnite Top brand hydraulic michina iri kubata yakachengeteka kutungamira muindastiri muChina. Izvo zvigadzirwa zvinotengeswa kune nyika dzinopfuura makumi matatu nenzvimbo mumisika yeEuropean, Asia neAmerica.
Metal Poda Briquette Muchina, Hydraulic Baler / Aluminium Inogona Dhinda Muchina, Sheet Metal Baler, Alligator Sheari Yenhare Digger, Horizontal Baler Aluminium Chidimbu Press Machine, Mhangura Chakagadzirwa Baler,